Ikhabethe eliyingqayizivele ehlathini! Ikhabethe lamapulangwe elithandekayo
Lier, Buskerud, i-Norway
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Therese
Jabulela izinsuku zokuvilapha noma ezisebenzayo uwedwa ehlathini.
Manje yisikhathi sokuzola ngokuphelele futhi uguqule ingcindezi eshaqisayo yansuku zonke. Ngempelasonto noma isonto, thola ukuzwa indlela yaseNorway yokuphila kwekhabethe njengoba kwakunjalo ngamakhulu angu-1800 no-1900. Izwa ukuthula, iphunga kanye nempilo yezilwane. Hamba uhambo lokuhamba ngezinyawo kwenye yazo zonke izindlela ezinhle nemizila e-Drammensmarka noma e-Finnemarka. Vumela wonke amakhandlela futhi ubase umlilo esitofini. Vula ibhodlela lewayini elimnandi kakhulu!
Thola ikhefu ekucindezelekeni kwansuku zonke nomsindo. Hamba uye ehlathini elijulile nelithulile laseDrammen. Hlala ungemuva kukhabethe eliyisisekelo elingenagesi namanzi. Izwa inkululeko yemvelo futhi ubonise ubulula bempilo. Yenza i-bonfire, hamba uhambe (ukushushuluza), uphakele izinyoni kanye ne-squirrel. Iba nenkomishi yekhofi elangeni noma ungenzi lutho nhlobo.
Le khabhinethi ilala 6, kodwa khumbula ukuthi ingamamitha-skwele angama-35 kuphela. Imibhede emi-2 e-mezzanine enesitebhisi.Ikhabethe elincane nelinokuthula ehlathini, eduze kwezindlela zokushushuluza nezindlela zokuhamba izintaba. Awukho ugesi, futhi awekho amanzi ngaphakathi kwendlwana. Ikhabethe lishiswa yisitofu sokhuni esivuthayo, futhi amanzi anikezwa emfudlaneni, noma umthombo ongamamitha angu-200 ukusuka endlini. Kufanele ujabulele ukuhamba imizuzu eyi-15 ukusuka endaweni yokupaka. Imali yokuhlanza ihlanganisa i-propane ye-heater nokupheka. Ihlanganisa ilineni yombhede kanye namathawula ambalwa ezandla futhi ihlanganisa izinkuni zokubasa. Akubandakanyi ukuhlanza ukungcola kwakho, izitsha noma ukubuyisa udoti wakho. Ngicela ushiye ikhabethe lihle futhi licocekile futhi ngizoqinisekisa ukuthi nawe ufika ngezinga elifanayo.
Indlu yehlathi elula engenagesi namanzi ahambayo. Amanzi okuphuza alandwa ngomthombo cishe. Amamitha angu-200 phansi kwentaba. Indawo evulekile nekhanyayo egqumeni elincane. Imizuzu eyi-15 uhamba ngezinyawo ukusuka endaweni yokupaka eLandfallhytta.
umbhede oyidabulu engu- 1, Imibhede elala umuntu oyedwa engu-3, 1 umbhede wosofa
2 osofa, omatilasi abangu- 2
4.95(22 okushiwo abanye)
Kunamanye amakhabhini azungeze ehlathini. ngicela ungaphambuki. Zonke izindlela zokuhamba izintaba ezawo wonke umuntu. Zizwe ukhululekile ukuhambahamba ehlathini imayela nekhilomitha. hlola umzila we-ski. cha ngezimo ze-cross country.
Ngitholakala ku-Airbnb, i-imeyili, ama-sms kanye nezingcingo.
UTherese Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Lier namaphethelo